IPanguin: Bona Umphumela Wezinguquko ze-Google Algorithm | Martech Zone
IPanguin: Bona Umphumela Wezinguquko ze-Google Algorithm
NgoLwesine, Novemba 22, 2012 NgoLwesithathu, Novemba 21, 2012 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi amathuluzi alula abaluleke kakhulu. Isikhathi nesikhathi, amaklayenti ethu azibuza ukuthi ngabe athintwe noma cha yini yizinguquko ze-algorithm iGoogle eqhubeka nokuziveza. Asithambekele ekukhathazekeni ngabo kakhulu njengoba sasinjalo esikhathini esedlule - ngokuthembeka konke ama-algorithms athuthukile kahle kakhulu ukuthi sigxila kakhulu ekubhaleni okuqukethwe okungcono nokuqinisekisa ukuthi kulula ukwabelana ngakho.
Uma ungathanda ukugcina amathebhu aseduze kakhulu ku-algorithm, bekungeke yini kube kuhle ukunamathisela izibuyekezo zangempela ze-algorithm nge-organic search traffic yakho ukubona ukuthi kube nomthelela othile? Yilokho kanye iBarracuda ekunikezayo ngethuluzi layo elibizwa IPanguin. Ngena ngemvume kuthuluzi, khetha i- analytics akhawunti ongathanda ukuyicubungula, futhi ithuluzi limboza ithrafikhi yakho yosesho lwezinto eziphilayo ngezinsuku zeGoogle Panda, iPenguin kanye nolunye ushintsho olubalulekile lwe-algorithm.
Njengoba ukwazi ukubona, sathatha idiphu ekukhipheni iPenguin Exact Match. Kade silwa nezinye izizinda ebezintshontsha okuqukethwe kwethu nokuqinisekisa ukuthi izizinda zethu ziqondisa kabusha kahle. Sifuna ukuqiniseka ukuthi asinazo izizinda laphaya ezinenani elikhulu lokuqukethwe okuyimpinda okuvela kithi.
U-Erin nethimba lakhe lochwepheshe be-SEO ku Amasu Esiza wangiphendulela kuleli thuluzi ngesikhathi sohlelo lwethu lwamasonto onke, Umphetho Womsakazo Wewebhu - singumxhasi wombukiso.
Tags: algorithmi-google algorithmIzinguquko ze-google algorithmgoogle pandai-google penguinPandapenguin
Imikhuba Yokuthenga Yeselula Emhlabeni Wonke
Ukuqapha nokushicilela okusebenzayo kwe-Social Media